Ngakho-ke uvula kanjani labo bafundi abazithandayo kuba amakhasimende akhokhelayo? Nacisti ama-7 amaqhinga okukhonkolo ongawasebenzisa namuhla.
I-TOM BIHN inomsebenzi owusizo wokunqoba ukupnikisana kwentengo ku-FAQ yabo
Izilaleli zaho zingase zibe nemibuzo efana nale:
“Isibonelo A protiv Isibonelo B: Yikuphi Okuhle Kuma-SAHM-ovi / Abasebenzi Abaqashi / njll?”
“Indlela Ukusebenzisana Kwako Nokuphepha Kanjani Ukugcina Imininingwane Yakho Iphephile”
“Izizathu ze-7 Akufanele Ungizuze” (Lesi sihloko sokuthunyelwe, isihloko esibi sizoheha ukuchofoza ngenkathi okuqukethwe kuzokhipha amaklayenti afanelekile.)
“Kungani [UMkhiqizo] Ubiza Kangako?”
… lezi yizo zonke izingcingo ezenzweni (CTA).
Umbhali nomqeqeshi u-Elna Kairo ususe iziphazamiso futhi wagxila kwiwebhusayithi yakhe nakwibhulogi kunhloso yakhe ye # 1.
Isakhiwo sekholomu esisodwa (akukho ama-bočne trake), okubeka ukugxila kokuqukethwe kwakhe
Ukubeka “i-besplatni tečaj” njengendlela yokukhetha imenyu yokuqala
Kubandakanya isixhumanisi ekhasini lokufika lesifundo kumbhali biok ekupheleni kwawo winke okuthunyelwe
Lokho akusho ukuqeda konke okuthunyelwe nge “Siyabonga ngokufunda, manje Ondaga umkhiqizo wami! “
Ukucela umfundi webhulogi engavamile ukuba athenge ngokushesha u angažirati iqhube kakhulu um nje kusayithi lakho ukuthola ulwazi.
Ukubhalisa kwi-newsletter kuyingozi kakhulu, ngokungafani nokunikeza imininingwane yabo yekhadi lesikweletu kusayithi elisha, noma ukusebenzisa imaju enkambeni abangaqiniseki ukuthi bayayidinga. Ukuze uphendule labo abafundi abangajwayelekile kumakhasimende (bese uthola ukuthi bangabalandeli bakho abahle ngempela), iphephandaba lilungile.
Ukuze uguqulwe, cela abafundi bakho ukuba babhalisele i-newsletter yakho ye-imeyili ngokufaka amafomu wokungena ekupheleni kwawo winke amaposi, be ufaka i-freebie kubhalisile abasha. Ngcono nakakhulu, faka uchungechunge lwe-autoresponder noma inkambo yamahhala ezokwehlisa ukukhathazeka kwabo, uphendule imibuzo yabo, futhi uqinisekise ukuthi uyabaluleka. Amathuluzi afana OptinMonster futhi GetResponse kuhinje kakhulu ngalokhu.
Ako ne želite dobiti optimizaciju kutije OptinMonster ne-GetResponse, ja pretvoriti Pro.